यी हुन आफ्नो ज्या*नको बा*जि लगाएर ब*म डि*स्पोजल गर्ने नेपाली सेनाका महिला कर्मचारी (भिडियो हेर्नुस् ) - Kavre Online
देश र जनताको सुरक्षाको निम्ति खटिएर काम गर्न नेपाली सेनामा भर्ना हुने रहर त कसलाई पो हुदैन र तरपनि कतिलाई यस्तो सौभाग्य नमिल्न सक्छ। जो भर्ती हुन्छ्न् उनीहरु आफुलाई निकै भाग्यमानी ठान्छ्न् किनकी देश र जनताको सुरक्षामा खटिदा गर्बले छाती चौडा हुन्छ।
यस्तै देश र जनताको सुरक्षाका निम्ति रात दिन नभनी खटिने नेपालि महिला सेनानीहरुको कथा बेग्लै छ, आफ्नो काम र कर्तव्य बारे के भन्छन त उनीहरु? यो हेर्नुस् नेपाली सेनाका महिला कर्मचारीहरु सङ्ग गरिएको यो कुराकानी ।
Prevडाक्टर पढ्न गएकी नेपाली चेलीमाथी बाङ्लादेशमा यौ*न शो*ष*ण । Om Hoaspital ले मान्छे मा*र्न पाईन्छ ?
Nextबुवाआमासँगै दशैँ मनाउन भनेर घर जाँदै गर्दा, बाटोमा फोटो खिच्ने क्रममा खोलामा खसेर देवी बेपत्ता
नायक रमेश उप्रेती भन्छन्, ‘रविजी भनेको आवाजविहीनको आवाज हो, अपराधि होइन’